Soo-saarista Alaabada, Ururinta Macluumaadka, Hanuuninta Suuqa - Yino
Mart International Trade (Degmada 1)
Mart International Trade (Degmada 2)
Ganacsiga Caalamiga ah ee Mart (Degmada 3)
Mart International Trade (Degmada 4)
Ganacsiga Caalamiga ah ee Mart (Degmada 5)
Qurxinta & qurxinta
Alaabada ay caruurtu ku ciyaaraan
Wax soo saarka maalinlaha ah
Waxyaalaha kahortaga cudurrada
farshaxan gacmeedyo & hadiyado
isboortiga & wakhtiga firaaqada
Shaqaalaheena wax soo iibsiga ee xirfadlayaasha ah ayaa ku siin doona macluumaad qiimo leh waqti gaaban oo ay ku jiraan qiimaha EXW ee alaab-qeybiyaha, MOQ, naqshadeynta, waqtiga dhalmada, ilaalinta tayada, saadka, nadiifinta kastamka iwm.
Uruurinta Macluumaadka & Hanuuninta Suuqa
waxaan ururinay macluumaad kala duwan oo alaab-qeybiyeyaal ah. Waxaanan leenahay waxyaabo xirfadleyaal ah oo ku hadla luqadda ugu fiican ee waddankaaga ayaa kugu hagi kara suuqa.
Amarka la socda
Ganacsadeheena xirfadlaha ah ee suuqa sifiican u yaqaana ayaa kugu hagi doona suuqa. Isbarbardhiga tayada iyo qiimaha, xulashada alaab-qeybiyeyaasha si fudud oo dhaqso leh, una keydso waqtigaaga qaaliga ah.
waxaan si adag u raacaynaa muunada si aan u kormeerno alaabada.Hadii aad soo iibsato wax soo saar xirfad leh sida mashiinka waxaan ka heli doonnaa hal shey oo xirfadlayaal ah oo ka socda aaggan si loo sameeyo QC. Oo waxaan ku siin doonaa warbixin kormeer ah Kaliya kadib xaqiijintaada waxaan bilaabi doonnaa inaan sameyno geeddi-socodka maraakiibta.
Wixii alaab ah, waxaan kuu soo bandhigi karnaa shaybaarro si aad u xaqiijiso. Waxaan sidoo kale fiiro gaar ah u leenahay isbeddellada suuqa oo waxaan kuu soo bandhigeynaa muunad cusub.
Marka Maxaa YINO INTERNATIONAL CO., LTD
Wixii alaab ah, waxaan kuu soo bandhigi karnaa shaybaarro si aad u xaqiijiso
Haddii aad ka iibsato wax soo saar xirfad leh sida mashiinka waxaan ka heli doonnaa hal shey oo xirfadlayaal ah oo ka socda aaggan si loo sameeyo QC
Damaanad-Fasalka ugu Fiican
Ka dib helitaanka oggolaanshaha macaamilka waxaan amar la siin doonnaa alaab-qeybiyeyaasha isticmaala cinwaanka shirkaddayada, oo si taxaddar leh ayaan u hubineynaa qandaraaska si loo hubiyo inuu sax yahay.
Isbarbardhiga tayada iyo qiimaha, xulashada alaab-qeybiyeyaasha si fudud oo dhaqso leh, una keydso waqtigaaga qaaliga ah.
YINO INTERNATIONAL CO., LTD waa shirkad xirfadlayaal dhoofinta wax ka badan 16 sano oo khibrad ah. Xafiiskeennu wuxuu ku yaal YIWU CITY gobolka ZheJiang, taasi waa mid ka mid ah magaalooyinka dhoofinta ugu muhiimsan ee Shiinaha. Macaamiisheena ka socda Yurub 、 America 、 South America 、 Africa iyo wadamada kale ee aduunka.
100% Shukumaan cudbi ah oo la jeexjeexay oo jilicsan
12 Midab Qalin ah Deji 0.5 Gel qalin
5 ee 1Family Fitness Jimicsiga Qalabka Wheel R ...
Alaabta xayawaanka lagu calaliyo eey digaagga u camiran eeyga
Degree Furniture Foot ahama ahama Support A ...
Qurxinta Arooska Garlic Eucalyptus Qurxinta Qurxinta
Sharaabaad Christmas tolida sharaabaad Snow Elk xumaaday Stock ...
Matte Lipstick biyuhu Square Tube Multicolo ...
Qolka 70298, dabaqa 5aad, Suuqa ganacsiga caalamiga ah ee diidan 5, Yiwu City, Zhejiang, Shiinaha.
Noocyada Gashadda wajiga
waxyaabaha kahortaga cudurrada
Talooyin ku saabsan meelaynta farsamada guriga
Sidee loo dayactiraa dahabka dahabka leh?